Trump iyo Clinton oo Caawa ku Ballansan Dooddii Labaad
Trump iyo Clinton
Musharaxiinta xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimoqraadiga Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa mar kale caawa isku arkaya dooddii labaad ee madaxweynenimada, xilli Jamhuriyiinta ay dalbanayaan in musharaxooda uu ka haro tartanka.
Dalabyada lagu doonayo in Trump uu tartanka ka haro ayaa ka dhashay markii ay soo shaacbaxdy cajalad muuqaal ah oo Trump laga duubay sanaddii 2005, isaga oo hadal aad u xun ka sheegaya dumarka iyo sida uu u xod-xoto.
Trump ayaa axaddii sheegay inaysan jirin wax fursad ah oo uu tartanka uga harayo, xilli bil kaliya ay ka hartay doorashada oo dhaceysa 8-da bisha November.
Hase yeeshee Hillary Clinton, xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Mareykanka, oo isku dayeysa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Mareykanka, ayaan weli si shaacsan uga hadlin fadeexadda cusub ee Trump kusoo baxday.
Wararka ayaa sheegaya inay arrintan kusoo qaadi doonto doodda caawa oo ka dhaceysa magaalada St. Louis ee gobolka Missouri.
Qoraal yar oo ay soo dhigtay barta Twitter ayey jimcihii hadallada Trump ku macneysay “Wax laga naxo”.
Islamarkaana Trump ayaa murankan cusub ee hareeyey ku sheegay “Wax aan ka badneyn dareen weecin”, inkasta oo codadka ra’yiga dadweynaha ay muujinayaan inuu hoos usii dhacayey ka hor inta aysan arrintan soo shaac bixin.
Clinton ayaa iminka Trump ka horeysa celcelis ahaan afar boqlkiiba, waxaana ay sidoo kale kusii xooganaaneysaa gobollada sida aadka ah loogu loolamo.
Doodda caawa ayaa dad badan rumeysan yihiin inay tahay fursad Trump uu dib ugu soo kici karo, ama soo geba gebeyn karta ololihiisa doorasho.